Shiinaha Nooca ugu dambeeya ee nuugista nuuca nambarka NFPA FM ee bamka dabka iyo soo saarayaasha | Tongke
Qaabka Maya ： XBC-ES
End bambooyin nuugista bartamaha waxay magacooda ka helaan marinka ay biyuhu qaadaan si ay u galaan mashiinka. Caadi ahaan biyuhu waxay galaan hal dhinac oo biyo kiciyaha, iyo bambooyin nuugista dhammaadka jiifka ah, tani waxay u muuqataa inay soo galayso "dhammaadka" bamka. Si ka duwan nooca loo kala jeexjeexay tuubbada tuubbada iyo matoorka ama matoorku dhammaantood waa siman yihiin, iyadoo laga takhalusayo walaaca ku saabsan wareegga bamka ama jihaynta qolka mashiinka. Maaddaama ay biyuhu ka galayaan dhinac dhinac qalabka wax lagu buufiyo, waxaad luminaysaa awoodda aad ku yeelan karto labada dhinac ee qalabka wax lagu rujiyo. Qaadashada taageerada waxay noqon doontaa mid ka timid matoorka laftiisa, ama mashiinka mashiinka mashiinka. Tani waxay ka hortageysaa isticmaalka nooca bamka ee codsiyada socodka biyaha waaweyn.
Ammaanka Hubinta Tayada
Hal Marxalad Bamgaree Afaa'iidooyinka:
● Si toos ah isugu xidhan, caddayn gariir iyo buuq hooseeya.
Diameter Dhexroor isku mid ah kanaalka soo gala iyo kan laga baxo.
Bearing Qaadista C&U, oo ah nooca ugu caansan Shiinaha.
Wareegidda qaboojinta socodka waxay hubinaysaa in farsamooyinku xirmaan nolol dheer.
Foundation Mu'asasad yar ayaa loo baahan yahay taas oo badbaadin doonta maalgashiga dhismaha 40-60%.
Seal Shaabad wanaagsan oo aan daadad lahayn
Structure Qaabdhismeedka is haysta, inta badan codsashada dhismayaasha casriga ah.
Ing Qasnadda tuubada: dahaadhka muquuninta ee ku xidhan isku xidhka tuubada waxa qaabeeyey oo soo saaray midka ugu sarreeya imika qaab xasaasi ah, iyada oo ay ka soo galaan kana soo baxaan isla dhexroor. Fiilooyinka ayaa u dhigma GB4216.5, waxaana lagu qalabeeyaa Rp1 / 4 ama Rp 3/8 cadaadiska cadaadiska.
♦ Dareere: Dareere xidha, xaddidna ma leh leexashada jihada ka hoosaysa heerkulka biyaha ee ka hooseeya 80 ° C iyo 120 ° C.
Design Naqshadeynta gaarka ah ee giraanta shaabadda firfircoon waxay hubisaa in si fiican loo xirxiro oo loo shaqeeyo.
Capabilities Dhamaystir awoodaha been-abuurka ee guriga
Capabilities Awoodaha tijaabada ee farsamaysan oo ay weheliyaan macaamiisha qalabaysan oo loogu talagalay dhammaan heerarka NFPA
Models Moodooyinka jiifka ah ee awoodda ilaa 2,500 gpm
Models Moodooyinka taagan ee awoodda illaa 5,000 gpm
Models Moodooyinka khadka ku jira ee awoodda illaa 1,500 gpm
● Dhammee moodooyinka nuugista ee awooda illaa 1,500 gpm
Ves Wadayaasha: mashiinka korantada ama mishiinka naaftada
Units Unugyada aasaasiga ah iyo nidaamyada la baakadeeyey.
Electric Motor Drive iyo Diesel Engine Drive bambooyin dab ayaa loo diyaarin karaa iskudhaf kasta oo bambooyin, wadayaal ah, kontaroolada iyo agabyada loogu talagalay codsiyada adeegga dabka ee ku qoran iyo kuwa la ansaxiyay. Unugyada xirmooyinka iyo nidaamyada ayaa hoos u dhigaya qiimaha rakibidda mashiinka dabka waxayna bixiyaan kuwaas.
Gawaarida Korantada Hal mashiinka dabka mar keliya
Mashiinka Naaftada Marxalad keli ah bamka dabka
Hore: Taxanaha TWP Mobile Two treys Diesel Engine Drive Vacuum Priming well point pump pump pump pump
Xiga: Kala saar laba nooc oo nuugid NFPA UL FM bamka dabka
Tilmaamaha Soo Saarida Mashiinka Dabka ee TKFLO
Nooca Bamka Ku soo afjaro bambooyinnada nuugista sanduuqa dhexe oo leh qalab ku habboon bixinta biyo siinta nidaamka ka hortagga dabka ee dhismayaasha, dhirta iyo daaradda.
Awood Ilaa 2500GPM (567m3 / saac)
Madaxa Ilaa 340feet (104meters)
Cadaadis Ilaa 147 Psi (10 kg / cm2, 1014 KPa)
Awoodda Guriga Ilaa 350HP (260KW)
Wadayaasha Matoorrada korantada ee korontada iyo matoorada naaftada ah
Nooca dareeraha ah Biyaha
Heerkulka Jaangooyo ku jira xaddidaadda hawlgalka qalabka qancinta.
Qalabka Dhismaha Bir bir ah, Naxaas rakiban
baaxadda wax la siinayo: Mashiinka wadista mashiinka dabka + guddiga xakamaynta + Bamka Jockey Mashiinka korontada ku shaqeeya ee mashiinka korontada + koontaroolka + Jockey pump
Codsi kale oo loogu talagalay cutubka fadlan kala hadal injineerada TKFLO.